उपदेशक3ERV-NE - एउटा समय हुन्छ - Bible Gateway
एउटा समय हुन्छ
3 प्रत्येक कुराको लागि एउटा उचित समय छ र यो पृथ्वीमा प्रत्येक कुराको सही समयमा हुन्छ।
2 जन्म लिने एउटा निश्चित समय छ,
र मृत्युको पनि।
रूख रोप्ने एउटा समय हुन्छ,
अनि त्यसलाई उखेल्ने एउटा समय छ।
3 त्यहाँ मार्ने एउटा समय छ,
निको पार्ने एउटा समय छ,
भत्काउने एउटा समय छ,
बनाउने एउटा समय।
4 कराउने र रूने एउटा समय हुन्छ,
अनि हाँस्ने र आनन्द गर्ने एउटा समय हुन्छ।
शोक मनाउने एउटा समय छ,
र नाच्ने र गाउने एउटा समय हुन्छ।
5 एक समय हुन्छ ढुङ्गा फ्याँक्ने,
एक समय हुन्छ ढुङ्गा थुपार्ने।
कसैलाई अंगालोमा हाल्ने एक समय हुन्छ,
त्यसै छोडिदिने एउटा समय हुन्छ।
6 कुनै चीज खोज्ने एक समय हुन्छ,
हराओस् भन्ने एकसमय हुन्छ,
कतै फालि दिने एक समय हुन्छ,
र राख्ने एक समय हुन्छ।
7 त्यहाँ लुगा च्यात्ने एउटा समय छ,
र लुगा सिलाउने एउटा समय।
त्यहाँ चुपचाप रहने एउटा समय छ,
बोल्ने एउटा समय छ।
8 एक समय हुन्छ माया गर्ने,
एक समय हुन्छ घृणा गर्ने,
एक समय हुन्छ झगडा़ गर्ने
र एक समय हुन्छ मेल-मिलाप गर्ने।
परमेश्वर आफ्नो संसारलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ
9 के मानिसले आफ्नो कठोर परिश्रमबाट वास्तवमा केही पाउँछ? 10 मैले त्यो कठोर परिश्रम देखेको छु जुन परमेश्वरले हामीलाई गर्नको लागि दिनु भएको छ। 11 परमेश्वरले मानिसहरूको हृदयमा बितेको समय र आउने समयको चेतना राखि दिनुभएको छ। तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ ती कुराहरू हामी पूर्णरूपले कहिल्यै बुझ्न सक्दैनौं। तर पनि परमेश्वरले हरेक कुरा उचित र उपयुक्त समयमा गर्नुहुन्छ।
12 मैले बुझें कि मानिसहरूको निम्ति सबैभन्दा उत्तम कुरो यही हो, उसको जीवनमा आनन्द लिनु र असल गर्नु हो। 13 परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि प्रत्येक मानिसले खाओस्, पियोस् र आफ्नो काममा आनन्द लिइरहोस्। यी कुराहरू परमेश्वरबाट पाइएको उपहार हुन्।
14 म जान्दछु परमेश्वरले जे घटित गर्नुहुन्छ त्यो सदा घट्छ नै। मानिसले परमेश्वरको कामलाई एक रति बडाउन पनि सक्दैनन् र एक रति घटाउन पनि सक्दैनन्। परमेश्वरले यस्तो यसकारण गर्नुभयो कि मानिसहरूले उहाँको आदर गरून्। 15 जुन अहिले भइरहेको छ त्यो पहिले पनि भएकै हो। भविष्यमा के हुनेछ त्यो पहिले पनि भएकै थियो। जे हुन गयो परमेश्वरले त्यसको लेखा लिनुहुन्छ।
16 यस जीवनमा मैले यी कुराहरू पनि देखेको छु, कि न्यायालय जहाँ न्याय र भलाई हुनुपर्छ, तर त्यहाँ आज खराब मात्र पाइन्छ। 17 यसकारण मैले आफ्नो मनमा भनें, “त्यहाँ हरेक कुरा अनि हरेक कार्यको निम्ति सही समय छ। परमेश्वरले भलो मानिस र खराब मानिसको न्याय गर्नु नै हुन्छ।”
के मानिसहरू पशु जस्ता नै छन्?
18 मैले मानिसहरूको विषयमा सोचें अनि आफैंलाई भनें, “परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि मानिसहरू आफूले आफूलाई त्यही रूपमा देखोस् जुन रूपमा तिनीहरूले त्यो पशुहरूलाई देख्दछन्। 19 के एउटा मानिस पशु भन्दा उत्तम छ? छैन! किनकि हरेक कुरो व्यर्थ छ। मानिस तथा पशुहरू एउटै तरीकामा मर्छन्। तिनीहरू पृथ्वीमा आउँछन् पृथ्वीमा नै शेष हुन्छन्। 20 मानिसहरू र पशुहरूको देहको अन्त एकै प्रकारले हुन्छ। तिनीहरू माटोबाट आएका हुन् अनि माटोमा नै मिल्छन्। 21 कसले जान्दछ कि मानिसको आत्मालाई के हुन्छ? कसले जान्दछ मानिसहरूको आत्मा परमेश्वर कहाँ जान्छ अनि पशुहरूको आत्मा तल जमीनभित्र जान्छ?”
22 यसकारण मैले बुझें कि मानिसले गर्नु पर्ने सब भन्दा असल काम हो आफ्नो काममा आनन्द उपभोग गर्नु। एकजना मानिसले अर्कालाई भविष्यमा के हुनेवाला छ सो देखाउँन सक्तैन।